कुन समयमा यौनसम्बन्ध राख्दा भइन्छ गर्भवती ? (जान्नुहोस्) - Experience Best News from Nepal
प्रश्न: पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ? जान्नुहोस्
हस्तमैथुन हप्तामा कति पटक गर्नुपर्छ ! यसको फाइदा के कस्तो छ ? जान्नुहोस्
गर्भपातपछि यौन सम्पर्क : कसरी बनाउने सुरक्षित सम्बन्ध ? जान्नुहोस्
यसरी ओठबाटै थाहा हुन्छ महिलाको यौन चाहना पुरा पढ्नुहोस !
रक्सी खाएर यौनसम्पर्क गर्दा फाइदा कि बेफाइदा ? जान्नुहोस्